Maleeshiyaad taabacsan Axmed Madoobe oo Gaadiid Rakaab ah ku baartay inta udhaxaysa Qooqaani iyo Dhoobleey. | Halganka Online
Maleeshiyaad taabacsan Axmed Madoobe oo Gaadiid Rakaab ah ku baartay inta udhaxaysa Qooqaani iyo Dhoobleey.
Maleeshiyaadkii Axmed madoobe ee shareeca diidka ahaa ayaa bilaabay in ay baartaan gaadiidka shacabka ah ee isaga kala goosha magaalooyinka Afmadoow iyo dhoobleey wilaayada Islaamiga Jubbooyinka.
Wararka nagasoo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa xaqiijinaya in Maleeshiyaad hubaysan ay shalay gaadiid Rakaab ah ku baarteen wadada isku xirta magaalooyinka Kismaayo iyo Dhoobleey waxayna Jirdil iyo dhac baahsan ugaysteen Dad Shacab ah oo wadadaasi ku safrayay.
Maleeshiyaadka Hubaysan ee dhaca gaystay ayaa ah kuwii Mooryaanta Axmed Madoobe madaama ay ku hubaysanaayeen Hub culus oo aysan Burcadda caadiga ah haysan karin sida qoriga PKM iyo Baasuukayaasha garbaha laga gemo.
Ciidamada Xisbada Wilaayada Islaamiga Jubbooyinka ayaa saaka wado Howlgallo lagu baacsanayo kooxahaasi Burcadda ah ee dhibaatada ugaysanaya shacabka Muslimiinta ah.
Maleeshiyaadkan isbaarooyinka dhigtay ayaa ah kuwii Axmed Madoobe oo howdka ku jaagooday oo doonaya in ay baartaan shacabka, Axmed Madoobe ayaa ah Mujrim diidan ku dhaqanka shareecada Islaamka.
« Ciidamada Milleteriga Shabaabul Mujaahidiin oo Gacanta ku dhigay 10 Gaadiidka dagaalka ah oo ay lahaayeen Maleeshiyaadka Qabuura Galeen G/gaduud ka dagaalama. Xarunta Xukuumada ridada ee Ex Villa Soomaaliya maxaa ka dhex jira ? Isqabqabsiga Dowlada ridada ah oo Cirka isku sii shareeray.(WARBIXIN KOOBAN) »